Ihe ojoo nke formaldehyde dị oke na akwa ụgbọ ala
Data sitere na National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) na-egosi na ihe mberede okporo ụzọ na-akpata site na ute ụgbọ ala na-adịkarị. O doro anya na obere obere ụgbọ ala nwekwara ike iweta ihe egwu dị egwu na ekwesịghị ileghara ya anya.
Agencylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrịa Cancer International (IARC) wepụtara akụkọ nke depụtara mmetọ ikuku dị ka ụdị mbụ nke carcinogens mmadụ. Na akụkọ ahụ, IARC zoro aka na data na 2015, ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ n'ọrịa cancer akpa ume nke mmetọ ikuku ruru 283,000. Mana n'eziokwu, nsogbu nke mmetọ ikuku anaghị adị naanị n'èzí, mana mmetọ ikuku na nke ụgbọ ala dịkwa oke njọ, ka anyị kwuo maka mmerụ ahụ mmadụ na-akpata site na akwa ụgbọ ala nwere oke formaldehyde!
Achọpụtara Formaldehyde dị ka klaasị mbụ na 2006. Otu esi ewepu formaldehyde ma bulie ogo ikuku abụrụla isiokwu ahụike nke anyị na-agaghị eleghara anya. Otú ọ dị, enwere ike ịsị na formaldehyde, nke na-emerụ ahụ mmadụ na ndụ, dị ebe niile. Ihe ndị metụtara ya gụnyere arịa ụlọ, ala osisi; uwe ụmụaka, uwe elu na-abụghị nke ígwè; nri ngwa ngwa, ihe eji esi nri, osikapa; swid na-acha uhie uhie, kukumba oké osimiri, ihe mkpuchi ehi, oporo, na ọbụna ụgbọ ala. O siri ike ịhụ na uwe, nri, ụlọ na njem - ihe anọ kachasị mkpa na ndụ anyị, formaldehyde etinyela aka. Ulo oru nke oma na-eme ka ndị mmadụ nwee nchegbu.
Dị ka ụkpụrụ mba si dị, ego nke formaldehyde a na-agbanye na ụgbọ ala ekwesịghị ịdị elu karịa 0.08 mg; ọ bụrụ na ọ ruru 0.1-2.0 mg, 50% nke ndị nkịtị nwere ike ịnụ ísì; ọ bụrụ na ọ ruru 2.0-5.0 mg, anya na trachea ga-ewe iwe ọkụ, na-ebute oke mbibi. Snee, ụkwara na mgbaàmà ndị ọzọ; iru 10 mg ma ọ bụ karịa, nsogbu iku ume; iru 50 mg ma ọ bụ karịa, ga-ebute ọrịa ndị dị egwu dịka oyi baa; na mgbakwunye, formaldehyde nwekwara ike imetụta ọmụmụ, dịka ọmụmaatụ, inhalation nke ogologo oge nke formaldehyde na ụmụ nwanyị dị ime nwere ike ịkpata mgbagha nwa ebu n'afọ na ọbụna ọnwụ; inhalation nke ogologo oge nke formaldehyde n'ime ụmụ nwoke nwekwara ike Ọ nwere ike ibute nsonaazụ ọjọọ dịka infertility na ọbụna ọnwụ.
Na 2010, National Indoor Air Quality Op na Health Academic Symposium wepụtara data dị ịtụnanya: ọnụọgụ ndị nwụrụ site na mmetọ ikuku n'ime ụlọ na mba ahụ eruola 111,000 kwa afọ, na nkezi 304 mmadụ na-emebi kwa ụbọchị.
N'ezie, ma ọ bụ mma nke ụgbọala ọhụrụ ma ọ bụ ụgbọ ala ochie, enwere nnukwu ihe fọdụrụ nke ihe ndị na-emerụ ahụ, ọkachasị gụnyere benzene, xylene na usoro benzene ndị ọzọ, formaldehyde, acetone na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ, nke ga-ebute mmetọ ikuku na ụgbọ ala. Mmetụta ịmịnye n'ime ahụ mmadụ, mgbaàmà ndị dị mkpụmkpụ dịka akpịrị na-adịghị mma, dizziness, ike ọgwụgwụ, allergies na anụ ahụ, enwere ike ịjụ oyi, mbelata ọgụ, na leukopenia, wdg, bụrụ ihe kpatara ọrịa ndị bụ isi dịka ọrịa kansa mgbe afọ ole na ole gasịrị, na-eduga na ọnwụ nke obi ụtọ maka ọkara nke abụọ nke ndụ.
Floorgbọ ala ụgbọ ala kwesịrị ị paya ntị na mma ka ọ na-elekwasị anya na ihe bara uru. Naanị ezigbo mma ka enwere ike ijide ahụike anyị. Ọzọkwa, ụgbọala na ụlọ anyị nke abụọ bụ otu ihe, ihe mbadamba ala ụgbọ ala na nke ala ala. Ha ga-abụ ndị na-enweghị mmekọrịta na gburugburu ebe obibi na enweghị ụtọ, Ọ dị mfe ihicha, enweghị nje.
Anyị chọrọ iweta ndị nwe ụgbọ ala ka mma. Naanị otu nkedo-ịkpụzi akwa TPE zuru oke nwere ike iweta ahụmịhe gburugburu ebe obibi na nke na-enweghị isi.
Dịka onye otu nke ụwa, maka mmepe ụwa n’ọdịnihu, anyị webatara 100% ihe eji eme ihe gburugburu ebe obibi nke TPE ma tinye ihe ha mepụtara na ngwaahịa ụgbọ ala iji chebe gburugburu ụwa, meziwanye nsogbu gburugburu ebe obibi, ma belata ibu gburugburu. Mmetọ. A na-atụ anya na ọ ga-ewetara ndị nwe ụgbọ ala ahụmịhe nke ahụike na nchekwa na-echekwa ma nwee nnukwu onyinye na nchekwa gburugburu ebe obibi.
Post oge: Dec-31-2020